100million – Page 113 – CELE WINGAGAR
သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံ နှင့် ချစ်သူတွေဖြစ် နေကြောင်းကိုအလင်း ပြလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမ….
သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံ နှင့် ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်းကိုအလင်းပြလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမ သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံကတော့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူဇာတ်ကားတွေမှာသရုပ်ဆောင် ရင်းပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းယွန်းစံကတော့ချောမောလှပသလို၊စိတ် ထားလေးလဲကောင်းပြီးအလှူအတန်းတွေမှာလဲပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းတတ်သေးပါတယ်၊ဆောင်းယွန်းစံကတေ ာ်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမဖြစ်တဲ့မေချစ် သွေးကိုတော့ပရိတ်သတ်တွေသိကြမှာပါ၊သူမကတော့သရုပ်ဆောင်ပိုငိတံခွန်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမ ပြတ်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလဲပိုင်တံခွန်နေကောင်းကျ န်းမာကြောင်းပြောကြားထားသေးပါတယ်၊ယခုတစ်ခါမှာလဲမေချစ်သွေးကသရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်း စံနှင့်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်းကိုအလင်းပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေချစ်သွေးကလွမ်းတယ်ကော က်စိန်ရေ၊ကင်မရာပြန်ကိုင်ချင်နေပြီဆိုပြီးတော့ပုံနှင်တကွသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ celeupdatenews celeupdatenews
သမီးအငယ်လေးကို အရိပ်တကြည့် ကြည့်နဲ့ လိုက်ကြည့် နေပြီး ငုံထား မ တတ် အချစ် တွေပိုလွန်းနေတဲ့ မေမေချမ်းချမ်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်….
သမီးအငယ်လေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ လိုက်ကြည့်နေပြီး ငုံထားမတတ် အချစ်တွေပိုလွန်းနေတဲ့ မေမေချမ်းချမ်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းရဲ့ ဒုတိယသမီးရတနာလေးကို မွေးဖွားခဲ့တာ လေးလပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီနော်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေ မငြိမ်သက်သေးတာကြောင့် ပြန်လာလို့ မရသေးပဲ အီတလီနိုင်ငံမှာပဲ နေထိုင် ရနေဆဲပါပဲနော်။သမီးလေးဟာ အသက်လေးလပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့် ဖြည့်စွက်စာတွေ ကိုယ်တိုင် ဂရုတစို […]